समाचार - सानो चरण ठूलो अंतर- बायो बोर्ड
परम्परा पीई रिसाइक्लि।
१: कला सामग्री पुन: प्रयोगको राज्य
१. चयन गर्दै
२. क्रमबद्ध गर्दै
Mel.मेल्टि and र पेलेटाइजिंग
१. स्क्र्याप प्लास्टिकको एउटा सानो अंश मात्र पुन: प्रयोग वा रिसाइक्लि forको लागि पुन: प्राप्त हुन्छ।
२. मिश्रित प्लास्टिक स्ट्रिमको लागत प्रभावी र कुशल रिसाइक्लिंग रिसाइक्लिंग उद्योगको सामना गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन सक्छ।
:: कच्चा माल
बायोडिग्रेडेबिलिटी कच्चा मालमा निर्भर हुँदैन, बरु यो पूर्ण रूपमा पोलिमरको रासायनिक संरचनामा निर्भर गर्दछ।
:: कम्पोस्टिंग / बायोडिग्रेडेबल
१ ： बायोडिग्रेडेबल कम्पोष्टि theमा एक विधिका रूपमा समावेश गरिएको थियो।
२ ： बायोडिग्रेडेबल मतलब कार्बन विषयमा समावेश हुन्छ सूक्ष्मजीव द्वारा पचाएपछि कार्बन पूर्ण रूपमा सर्कलमा छोडियो।
:: NUAP बायो / PLA कम्पोस्ट प्रक्रिया
:: हामीसँग प्रमाणपत्र छ